Japàna: Nafaitra ve ny Beaujolais Nouveau? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Avrily 2018 12:13 GMT
Koa satria niova ny daty tamin'ny sasakalina ny andron'ny alakamisy fahatelon'ny volana Novambra, misokatra ireo maivanaty saron'ireo tavoahangy Beaujolais Nouveau ary manomboka ny fety fankalazana – ao Japana. Ity no hetsika fanao isan-taona hatramin'ny taona 1980, vanim-potoana nisitrahan'ny firenena ny toekareny miboiboika. Mitohy ny fomban-drazana, toy ny fihaonan'ny rehetra any amin'ireo toeram-pisakafoanana sy fisotroana mba hankafy ny fiainana hanandramana ny zava-pisotro vaovaon'ny taona, mialohan'ny hanaovan'ny sasany eto an-tany izany. Ireo sasany tsy misotro ilay divay fotsiny, fa mandro amin'io.
Tamin'ny herinandro lasa, lohahevitra nalaza teny anivon'ireo blaogera ny fivoahan'ny Beaujolais Nouveau, anisan'izany i masakoski:
Tsy mbola nanandrana ny beaujolais nouveau 2007 aho, noho izany nilazako [ny rahalahiko] mba hividy an'io tao amin'ny 7-Eleven teo akaiky teo ary dia nisotro! […]
Natsiro ny beaujolais [nouveau] tamin'ity taona ity!
Na tsy y lehibe indrindra amin'ny mpanafatra ny Beaujolais Nouveau aza i Japana, nihena ny varotra. Manipika ireo antony samihafa mikasika io fironana io ireo blaogera.
Araka ny soratan'ny blaogera tokorin25, manomboka mametraka fanontaniana mikasika ny kalitaon'io divay omena lanja tafahoatra io ny olona:
Azo sainina ny antony nahavery ilay fanahin'ny fety fankalazana nanànana taloha. Satria efa hain'ireo olona ankehitriny ny tsiron'ilay divay .
Manoratra ny blaogera iray hafa hoe:
Na dia io ihany aza no azonao sotroina, izaho tsy afaka misotro betsaka amin'io. Tsy dia matsiro akory, hainaoo. Mandranoka be ilay izy.
Hitako ho tena matsiro ny divay mena mahazatra, saingy rehefa mandre ny teny hoe “kaikin” aho, sahala amin'ny mamporisika ahy hisotro an'io, ary ambonin'ny rehetra, fankalazana io. Eritreretiko ho toy ny fetim-pinjinjàna vokatra io.
“Nivoaka ny Beaujolais nouveau 2007!: 600yen ny vera. 3.200yen ny tavoahangy” izay no vakin'ny soratra eo amin'ny trano fisakafoanana iray ao Tokyo.
Mizara ny esoesony mikasika ilay fombandrazana ity blaogera ity:
Efa nanomboka hatramin'ny elabe tany aloha izany, rehefa nanao lalao iray ireo vitsivitsy mpisotro divay mba hahitàna hoe iza no hahazo beaujolais nouveau voalohany indrindra, dia niparitaka sy fantatra amin'ny maha-izy azy ankehitriny ilay izy.
Tsy vitako ny tsy hisaintsaina an'ireo mpahay divay ao Eoropa izay nanomboka ny lalao, mahita an'ireo Japoney izay – amin'ny hevitra kely fotsiny – dia milaza fa “ny beaujolais amin'ny fotoana famoahana azy no tena tsara” ary lasa hoe ” vendrana ianareo, tsy fantatrareo ve fa lalao fotsiny io. L・A・L・A・O”
Sahala amin'ny Krismasy sy ny Andron'ny Mpifankatia, miavaka ho an'ny Japoney izany, ary ao tsara.
Sovversivo creazione, mpianatra amin'ny lisea iray, mizara ireo fijeriny:
Toa ny Alakamisy fahatelo amin'ny volana novambra no andro namoahana azy…
Vao haingana no reko ny resaka betsaka mikasika azy io, nefa i Japana mividy ny ankamaroan'ireo naondrana.
Ny zava-misy, azonao amin'ny vidiny mora kokoa io any [Frantsa].
Eny, lazaina fa anisan'ny firenena manankarena izahay, nefa misondrotra ny vidiny noho ny fiakatry ny vidin-tsolika, ka mampanahy ahy ny amin'ny toebolam-pianakaviana.
[Ny tiako lazaina, lasa lafobe daholo ny zavatra rehetra…